Wax Ka Baro 10 Tallaabo Oo Ay Haweenaydu Isaga Reebi Karto Nin Jecel Balse Aanay Iyadu U Qabin Wax Jacayl Ah - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Wax Ka Baro 10 Tallaabo Oo Ay Haweenaydu Isaga Reebi Karto Nin...
Way adagtahay waxa ay haweenaydu odhan lahayd marka wiil gayaankeed ahi u soo ban dhigo qorshe jacayl iyo wadaagis mustaqbal balse aanay iyadu wakhtigaasi wax hammi ah u hayn doonayna. Waa suurta gal in wax badan kula soo gudboonaato wiilal aanad ka helin oo had iyo goor ku daba orda ama ku deyn waaya hadal haynta jaceylka ay ku qabaan.
Ma fiicna inaad is qasabtid una aqbashid oo kaliya inuu ku jecelyahay. Ogow wiilasha badankoodu waxay iska dhaadhiciyaan haddii aad ka amustid inaad jaceyl u qabtid.
Gabadh yahay Waxaba ha werwerin taasi way dhacdaa had iyo goor oo bani-adan baynu nahay qof kastena kama heli karno, haddaba qodobadan akhri si aad uga badbaadid:
1- U sheeg inaanad jecleyn, waxa laga yabaa inaad ‘markaa helin’ oo kaliya u baahatid. Waxa dhacda inaanay sidaas kugu dhaafin maxaa yeelay, raggu badankood ma fahmaan tusmada maldahan.
2- Qof aanan jirin kasoo qaad, tusaale ahaan haduu kugu dheegago kasoo qaad inaadan isagaba u jeedin, si kale marki loo dhigo isagoo dhan inkir.
3- La qabsigisa ku xidh markasta uu kaa dhex galo sheeko aad wadid, waxa ku filan oo kaliya ‘Fadlan, hasoo dhex galin sheekadeyda’.
4- Kaasho asxaabtada hadey kula ogyihin arintan, si ey kuugu cawiyan in aad waddo iska marisid kana dhaadhici inaadan wax jaceyl ah haba yaraate adan u qabin.
5- Ha amaahin macluumadkaga khaaska ah sida Email, teelefoon, ama meeshad dagantahay. Lana socodsi asxabtada taaso laga yabo inuu iyaga weeydiisto.
6- Isku xoqidu waa mid raggu had iyo goor ugu soo dhawaadan gabdhaha. Iska ilaali inuu isku ka xoqo ama kugu tiirsado hada meel wada fadhiisatan, istaagtaan, ama gacantada ku dhago hadaad salaantid.
7- Ka dhexbax isagoo dhan, tan hadaad si wanaagsan u sameysid waad ku guuleysan karta inaa niyada ka jabisid uuna ilaawo maleynta uu qabo oo ah inaad jeceshahay. Isku day inaad isaga fiirisid adoo ku dheegagaya qof ama wax ka dambeeya. Tani waxey ka dhaadhicineysa inaadan waxaba kasoo qadin isaga oo uu kula yahay qof caadi ah oo aad inkirtay sugnaantisa.
8- U cudurdaaro haduu ka codsado inuu casho ku kaxeeyo, una sheeg inaadan waxas diyaar u aheyn waliba isaga hadu booska buuxinayo. Kuna dheh “in walaaltinimo oo kaliya iney idinka dhaxeyso xaajadu ku fiicnaan laheyd”.
9- Ka raalli gali haduu kaa arkay calaamado muujinaya jaceyl aad u qabtid, una sheeg iney khalad ahaayeen.
10- Ugu dambeynti had iyo goor u sheeg inuu khalad ka galay marku ku weydistay xidhiidhka noocas ah.
Somalia: ”Addoon Ahaan Ayaa Afar Jeer Liibiya La Iigu Kala Iibsaday.” Soomaali Tahriib Ka Soo Noqday